Gemini ee Zodiac qadiimiga - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Gemini waa Laatiinka mataano. Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa May 22 iyo June 21 waxaad tahay Gemini. Gemini waxay samaysaa laba qof, badanaa (laakiin had iyo jeer maaha) ragga mataanaha ah. Akhrinta horoscope casriga casriga ah ee zodiac qadiimiga, waxaad raacdaa talada horoscope ee Gemini si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, caafimaad, oo aad u hesho aragti shakhsi ahaaneed.
Gemini Constellation ee Xiddigaha
Laakiin sidee ayay kuwii hore u akhriyeen Gemini bilowgii? Maxay uga dhigan tahay iyaga?
Halkan waxaa ah sawirka kooxda xiddigaha ee sameeya Gemini. Ma ku arki kartaa wax u eg mataano xiddigaha?
Sawirka Gemini Star Constellation. Ma arki kartaa mataano?
Haddii aan ku xidhno xiddigaha Gemini oo leh xariiqyo, weli way adag tahay in la arko mataano. Waxaan arki karnaa laba qof, laakiin sidee ‘mataan’ u soo baxeen?
Gemini Constellation oo leh xiddigo ku biiray khadadka
Halkan waxaa ah sawirka National Geographic boodhka zodiac ee muujinaya Gemini sida lagu arkay Waqooyiga Hemisphere.
Shaxda Xiddigta Zodiac National Geographic oo Gemini ku wareegsan
Xitaa iyada oo xiddigaha lagu soo daray sadar, way adag tahay in la arko mataano. Laakiin Gemini wuxuu dib ugu noqdaa ilaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha.
Castor & Pollux waa hore
Injiilku waxa uu tixraacay Gemini markii Bawlos iyo saaxiibbadiis ay markabka ugu socdaalayeen Rooma oo ay xuseen
11 Saddex bilood dabadeed waxaannu ku dhoofnay doonni Iskanderiya ka timid oo wakhtigii qabowga gasiiraddii joogtay taasoo sumaddeedii ahayd Walaalihii Mataanaha ahaa. (Falimaha Rasuullada 28:11)
Castor iyo Pollux waa magacyada dhaqameed ee labada mataano ee Gemini. Tani waxay tusinaysaa fikradda mataanaha rabbaaniga ahi waxay ahayd mid caan ah qiyaastii 2000 oo sano ka hor.
Si la mid ah xiddigihii hore ee zodiac, sawirka laba mataano ma aha mid ka muuqda kooxda lafteeda. Ma aha mid ku dhalanaysa kooxda xiddigaha. Balse, fikradda ee mataanaha ayaa ugu horreeya. Xiddiggii ugu horreeyay ayaa markaas fikraddan ku dul-saaray xiddigaha. Laakiin maxay asal ahaan ka dhigan tahay?
Gemini ee Zodiac
Sawirka hoose wuxuu muujinayaa Gemini oo ku wareegsan casaanka zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar. Waxa kale oo aad ku arki kartaa labada qof ee dhinaca-sketch.
Zodiac Masaarida qadiimiga ah ee Dendera oo Gemini ku wareegsan
Dendera zodiac qadiimiga ah, labada qof midkood waa naag. Halkii ay ka heli lahaayeen laba mataano oo lab ah, zodiac-kani wuxuu muujinayaa lammaane nin-naag ah sida Gemini.
Waa kuwan qaar ka mid ah sawirada xiddigiska guud ee Gemini
Gemini Astrology Image – Had iyo jeer lamaane laakiin mararka qaarkood nin / naag weli maanta
Waa maxay sababta xiddigiyayaashu ilaa wakhtiyadii hore ay had iyo jeer la xidhiidhaan Gemini lammaane – badanaa, laakiin had iyo jeer maaha, mataano lab ah?
Gemini ee Sheekada Qadiimiga ah
Waxaan ku aragnay Virgo in Qur’aanka iyo Baybalka/Kitaabku ay sheegeen in Eebbe sameeyey xiddigaha. Wuxuuna u yeelay calaamooyinka qiso si ay dadka ugu hanuuniyaan waxyi ka hor. Markaasay Nabi Aadam iyo Wiilashiisa bareen ubadkooda si ay ugu baraan Qaddarka Eebe. Virgo wuxuu sii sheegay farcanka bikrada ee iman doona -Nabi Isa al Masih NNKH.
Gemini ayaa sii wadata sheekadan. Xitaa haddii aadan ahayn Gemini ee dareenka horoscope casriga ah, sheekadii hore ee xiddigiska ee xiddigaha Gemini waa mid mudan in la ogaado.
Macnaha asalka ah ee Gemini
Waxaan ku fahmi karnaa macnaheeda asalka ah ee magacyada xiddigaha Gemini, kuwaas oo Giriigga iyo Roomaanku khuraafaadka jaahilka ah ee hadda la xidhiidha Gemini ay qalloocan yihiin.
Xiddigaha Carabiga ee qarniyadii dhexe ayaa magacyo u gudbiyay xiddigahan xiddigaha laga helay waqtiyadii hore. Xiddiga ‘Castor’ wuxuu leeyahay magaca carabiga Al-Ras al-Taum al-Muqadim ama “Madaxa mataanaha ugu horreeya”. Caanka ah ee Castor waa xiddiga Tejat Posterior, oo macneheedu yahay “cagta dambe”, iyada oo tixraacaysa cagta Castor. Waxa kale oo mararka qaarkood loo yaqaan Calx oo macneheedu yahay “ciribta.” Xiddig kale oo caan ah ayaa leh magac dhaqameed, Mebsuta, oo ka yimid Carabi hore Mabsūṭah, oo macneheedu yahay “dabada fidsan”. Mabsūṭah calaacasha libaaxyada ka dhigan dhaqanka Carabiga.
Pollux waxa loo yaqaan “Madaxa Mataanaha Labaad,” oo ka yimid Carabiga Al-Ras al-Tau’am al-Mu’akhar. Macnuhu maaha mid aad u badan oo ah laba isku mar wada dhashay, laakiin waa in laba la dhammaystiro ama lagu biiro. Tauratu waxay isticmaashaa isla kelmadda ay ku leedahay laba loox sanduuqa axdiga:
Oo waa inay hoosta labanlaab ka noqdaan, oo sidaas oo kalena waa inay dhammaadaan ilaa siddada kowaad dusheeda, oo labaduba waa inay sidaas ahaadaan, oo labada gees baa iska leh.
Baxniintii 26: 24
Sida sanduuqa doonnidu u labanlaabanto labada loox, sidaas oo kale Gemini wuxuu isu keenaa labadaba, ma aha wakhtiga dhalashada, laakiin by isku-xidhka. Maadaama Castor lagu aqoonsaday ‘cirib’ (barafkaiyo ‘cidiyihii libaaxa’ (Leo) kuwaas oo ah waxsii sheegyadii Isa al Masih NNKH, haddaba Castor waa sawirka xiddigiska ee Isa al Masih markii uu soo laabtay.
Laakiin waa ayo kan isaga ku biiray?
Qoraaladu waxay siinayaan laba sawir oo sharaxaya labada sawir ee Gemini sida 1) walaalo midaysan 2) nin iyo naag lamaane ah.
Gemini – Curadka & Walaalaha la korsado
Injiilku wuxuu sharaxayaa Ciise al Masih NNKH taas
Isagu waa suuraddii Ilaaha aan la arki karin, oo ah curadka uunka oo dhan;
Kolosay 1: 15
‘ Curad’ waxay tusinaysaa in kuwa kale iman doonaan hadhow. Tani waa la xaqiijiyay.
Waayo, kuwuu hore u yiqiin wuxuu haddana hore ugu doortay inay u ekaadaan suuradda Wiilkiisa, inuu isagu curad ku noqdo walaalo badan dhexdood.
Rooma 8: 29
Sawirkaani wuxuu dib ugu noqonayaa abuurista. Markii Eebbe abuuray Aadan iyo Xaawo isagaa abuuray
Oo Ilaah nin buu ka abuuray araggiisa, Ilaah araggiisa ayuu ka abuuray isaga; lab iyo dhaddig ayuu abuuray.
kan ahaa ina Enoos, kan ahaa ina Seed, kan ahaa ina Aadan, kan ahaa ina Ilaah.
Sawirka Asalka ah ee Marred… oo la soo celiyay
Goorma Aadan iyo Xaawa waxay caasiyeen Ilaah Waxyaalahan oo kale ayay kharribeen, oo wiilnimadeennii bay baabi’iyeen. Laakiin markuu Isa al Masih yimid isagoo ah ‘wiilka curad’ (eeg halkan waxa ‘wiilka’ looga jeedaa) wuxuu soo celiyay muuqaalkii. Haddaba iyada oo loo marayo Isa al Masih…
Laakiin in alla intii aqbashay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay, 13 oo aan ka dhalan dhiigga, ama doonistii jidhka, ama dad doonistiis, laakiin waxay ka dhasheen Ilaah.
Yooxanaa 1: 12-13
Hibada naloo fidiyay waa ‘inaynu noqonno carruurta Ilaah’. Uma aynaan dhalan carruurtii Ilaah laakiin xagga Isa al Masih waxaan ku noqonnay carruurtiisa korsashada.
4 laakiinse markii wakhtigii buuxsamay, Ilaah wuxuu soo diray Wiilkiisii, isagoo naag ka dhashay oo sharciga ku hoos dhashay, Galatiya 4: 4
Tani waxay ahayd Libra akhriska horoscope. Isa al Masih Allah korsada anagoo ah caruurtiisa. Waxa uu tan ku sameeyaa hadiyadda Isa al Masih, curad.
Markuu soo noqdo Isa al Masih wuxuu boqor ahaan doonaa boqor ahaan (eeg macnaha Masih). Baybalku wuxuu ku xidhay aragtidan doorka walaalka ka yar ee la korsaday.
Oo mar dambe habeen ma jiri doono, oo iyana uma baahnaan doonaan laambad iftiinkeed iyo iftiinka qorraxda toona; waayo, waxaa iyaga iftiimin doona Rabbiga Ilaaha ah, oo iyana waxay talin doonaan weligood iyo weligood.
Muujintii 22: 5
Tani waxay ku dhowdahay jumlada ugu dambeysa ee Kitaabka Qudduuska ah, sida ay u eegayso dhammaystirka wax walba. Halkaa waxay ku arkaysaa walaalihii la korsaday oo la xukumaya Curad. Dadkii hore ayaa tan ku sawiray waa hore Gemini oo ah kan ugu horreeya iyo walaalaha labaad ee xukunka jannada ku jira.
Gemini – Ninka & Naagta United
Nebiyadu waxay sidoo kale soo bandhigeen midowga guurka nin iyo naag si ay u sawiraan xiriirka ka dhexeeya Masih iyo kuwa isaga leh. Faahfaahinta abuurkii Xaawa & guurkii Aadam ee jimcaha toddobaadka abuurka si ula kac ah ayaa loo qaabeeyey si ay u muujiyaan midnimadan Masihga. Waxaa sidoo kale lagu sawiray gudaha sheeko jacayl Ruth & Bocas. Injiilku wuxuu ku soo gunaanaday sawirkan arooska ee u dhexeeya Wanka (Aries) iyo aroosadiisa.
Aynu rayrayno oo aad u faraxno, oo aynu ammaanno isaga; waayo, arooskii Wanku wuu yimid, oo afadiisiina way isdiyaarisay. ,
Muujintii 19: 7
Cutubka xidhitaanka waxa uu bixinayaa martiqaadkan soo socda sida ay u muuqato midawga cosmic ee Wanka iyo aroosadiisa
Ruuxa iyo aroosadduba waxay yidhaahdaan, Kaalay. Oo kii maqlaana ha yidhaahdo, Kaalay. Oo kii harraadsanuna ha yimaado. Oo kii doonayaaba biyaha nolosha hadiyad ahaan ha u qaato.
Aquarius wuu guursan doonaa oo wuxuu nagu martiqaadayaa inaan noqono Caruusadaas. Gemini ayaa tan sawirtay waa hore – midowga cosmic ee Wanka iyo aroosadiisa.
Gemini Horoscope ee Qoraallada
Horoscope waxay ka timid Giriigga ‘Horo’ (saac) oo macnaheedu yahay calaamadaynta (skopus) saacadaha xurmada leh. Nebi Isa al Masih wuxuu calaamadeeyay saacada Gemini (horo) sheekadiisa ku saabsan martiqaadka arooska.
Oo wakhtigaas boqortooyada jannadu waxay ahaan doontaa sida toban gabdhood oo bikrado ah, kuwa intay laambadahooda qaateen oo u baxay inay Haddaba boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiin doonaa toban gabdhood oo bikrado ah, kuwa intay laambadahooda qaateen, u baxay inay ninka arooska ah ka hor tagaan. 2 Shantood waxay ahaayeen doqonno, shanna caqli bay lahaayeen. 3 Kuwii doqonnada ahaa laambadahoodii bay qaateen, laakiin saliid ma ay qaadan. 4 Kuwa caqliga lahaase laambadahoodii bay qaateen iyo weelal saliidu ku jirto. 5 Laakiin ninkii arooska ahaa waa raagay, taas daraaddeed ayay wada lulmoodeen oo seexdeen. 6 Habeenbadhkiise qaylo ayaa yeedhay, Arooskii waa soo socdaaye, soo baxa oo ka hor taga. 7 Markaasaa bikradihii oo dhammu wada kaceen oo laambadahoodii hagaajiyeen. 8 Kuwii doqonnada ahaa waxay kuwii caqliga lahaa ku yidhaahdeen, Saliiddiinna wax naga siiya, waayo, laambadahayagii waa demayaan. 9 Laakiin kuwii caqliga lahaa ayaa u jawaabay oo waxay ku yidhaahdeen, Maya, waaba intaas oo ay nagu filnaan waydaa annaga iyo idinka; bal u taga kuwa iibiya oo ka soo iibsada. 10 Markay tageen inay soo iibsadaan, ninkii arooska ahaa ayaa yimid, oo kuwii diyaarka ahaa ayaa la galay guriga arooska, albaabkiina waa la xidhay. 11 Dabadeedna waxaa yimid bikradihii kale, oo waxay yidhaahdeen, Sayidow, Sayidow, naga fur. 12 Laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay, Anigu idin garan maayo. 13 Haddaba soo jeeda, waayo, garan maysaan maalinta ama saacadda.
Matayos 25: 1-13
oo saacaddii cashada ayuu addoonkiisii u diray inuu kuwii loo yeedhay ku yidhaahdo, Kaalaya, waayo, haatan wax waluba waa diyaar.
Laba nooc oo Gemini ah
Horscope Gemini wuxuu leeyahay laba saacadood. Isa al Masih waxa uu baray in ay jirto saacad sugan balse aan la garanayn marka uu Arooska dhaco qaar badana ay tebi doonaan. Kanu waa dulucda masaalkii tobankii gabdhood oo bikrado ah. Qaarkood diyaar uma ahayn saacaddii la ballamay oo sidaas ayay ku seegeen. Laakiin saacaddu way furan tahay oo Aroosku waxa uu sii wadaa dirida martiqaadyada dhammaan si ay ugu yimaadaan martiqaadka arooska. Tani waa saacadda aan hadda ku noolnahay. Waxaan si fudud ugu baahanahay inaan imaado sababtoo ah wuxuu sameeyay dhammaan shaqadii si uu u diyaariyo martiqaadka.
Akhriska Horoscope-kaaga Gemini
Adiga iyo anigu waxaan codsan karnaa horoscope Gemini maanta sida soo socota.
Gemini wuxuu cadeynayaa in martiqaadka xiriirkaaga ugu muhiimsan uu weli furan yahay. Waxa lagugu martiqaadayaa xidhiidhka kaliya ee ay xiddiguhu sheegeen in uu meesha ka saarayo dhammaan waxyaabaha kale ee la doonayo – korsashada qoyska boqortooyada adduunka iyo sidoo kale guurka jannada – mid aan waligiis lumin, kharribin ama libdhi doonin. Laakiin aroosku weligii ma sugi doono. Haddaba idinkoo garanaya oo feeyignaan ku rajaynaya nimcada laydiin keeni doono markii arooska la muujiyo imaatinka. Adigoo ah ilmo addeecsan oo ah Aabbahaaga jannada, ha u hoggaansamin damacyada sharka leh markaad ku noolayd jaahilnimada qaddartan.
Oo markaad u yeedhataan Aabbaha mid kasta shuqulkiisa si qumman u xukuma, waagiinna idinkoo cabsi leh oo shisheeyayaal ah ku noolaada. Naftaada iska saar dhammaan dabeecadaha sida xumaanta iyo khiyaanada oo dhan, munaafaqnimada, xaasidnimada, iyo cayda oo dhan. Quruxdaadu waa inaanay ka iman qurxinta dibadda, sida timaha timaha loo sameeyo iyo xidhashada dahabka dahabka ah ama dharka wanaagsan. Hase yeeshe, waa inay noqotaa tan gudahaaga, quruxda aan luminayn ee ruuxa qabow iyo aamusnaanta, kaas oo uu aad ula dhacsan yahay arooska imanaya. Ugu dambeyntii, u naxariiso, kalgacal, naxariis iyo khushuuc kuwa kugu xeeran. Astaamahan lagu soo bandhigay kuwa kugu xeeran waxay muujinayaan u-waafaqnaantaada aayahaaga – maadaama kuwa kugu xeeran sidoo kale lagu martiqaado isla dhalashada boqortooyada iyo arooska.
Si qoto dheer u galay Gemini & iyada oo loo marayo Sheekada Zodiac
Asal ahaan Gemini ma hagi go’aamada caafimaadka, jacaylka iyo barwaaqada. Halkii Gemini uu tusay sida Bixiyuhu u dhamaystiri doono madax furashadiisa. Gemini waxay muujinaysaa korsashadayada soo socota ee walaalka curadka ah iyo arooska jannada.
Si aad u bilowdo Sheekadii Zodiac-kii hore bilowgiisa arag Virgo. Sheekada Zodiac waxay ku sii socotaa Kansarka.
Si aad u qoto dheer u gasho Gemini eeg
Sida uu Aadan/Xaawa u saadaaliyay faahfaahinta Arooska
Xafladda Arooska Weyn – dad badan ayaa lagu martiqaaday laakiin..
Ruth & Bocas – Sawirka Arooska Soo socda
Tags:ancient meaning of geminicastor and polluxgeminigemini astrologygemini horoscopegemini twinsgemini zodiac